ᐉ Inqubomgomo Yobumfihlo - 【Ukuqhathanisa】 2022
Uma ulapha kungenxa yokuthi ufuna ukwazi kabanzi ngezibopho namalungelo ahambelana nawe njengomsebenzisi wale webhusayithi https://lacomparacion.comfuthi lokho kuhle kakhulu. Umsebenzi wethu ukukwazisa nokwakho ukwaziswa ngokufanele.
Kule Nqubomgomo Yobumfihlo sizokwazisa ngokungafihli lutho mayelana nenhloso yale webhusayithi nakho konke okuthinta idatha osinikeza yona, kanye nezibopho namalungelo ahambisana nawe.
Ukuze uqale, kufanele wazi ukuthi le webhusayithi ihambisana nemithetho yamanje ephathelene nokuvikelwa kwedatha, ethinta imininingwane yomuntu siqu osinikeza imvume yakho ekhanyayo namakhukhi esiwasebenzisayo ukwenza le webhusayithi isebenze kahle futhi ingathuthukisa umsebenzi wayo.
Ngokuqondile, le webhusayithi ihambisana nemigomo elandelayo:
El RGPD (Umthethonqubo (EU) 2016/679 wePhalamende laseYurophu kanye noMkhandlu wangomhla zingama-27 kuMbasa, 2016 mayelana nokuvikelwa kwabantu bemvelo.) ongumthethonqubo omusha we-European Union ohlanganisa ukulawulwa kokucutshungulwa kwedatha yomuntu siqu emazweni ahlukene e-EU.
La I-LOPD (I-Organic Law 15/1999, yango-December 13, mayelana Nokuvikelwa Kwedatha yomuntu siqu y I-Royal Decree 1720/2007, yangomhla zingama-21 kuZibandlela, Ukulawulwa Kwentuthuko ye-LOPD) elawula ukwelashwa kwemininingwane yomuntu siqu kanye nezibopho okufanele zithathwe yilabo ababhekele iwebhusayithi noma ibhulogi lapho belawula lolu lwazi.
La I-LSSI (Umthetho 34/2002, kaJulayi 11, ezinsizakalweni ze-Information Society and Electronic Commerce) elawula ukuthengiselana kwezomnotho ngezindlela zikagesi, njengoba kunjalo ngale bhulogi.
Umuntu ophethe kanye nomnikazi wale webhusayithi I-COSMOVIL TECHNOLOGIES, SL (Emuva kwalokhu i-COSMOVIL)
Ikheli elibhalisiwe: C / BEGONIAS, 279-280. 816-LIMA
Umsebenzi wewebhusayithi: ukusatshalaliswa kokuqukethwe okuhlobene Namaresiphi, izibonisi zokukhangisa, kanye nezincomo zemikhiqizo ehlobene.
meyili: [i-imeyili ivikelwe]
Idatha osinikeza yona ngemvume yakho, futhi ngokuvumelana nokusetshenziswa okusungulwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo, izofakwa efayeleni elizenzakalelayo elibhaliswe ngokufanelekile ne-Spanish Agency for Data Protection, lapho umuntu obhekele leli fayela ethi: COSMOVIL . Lokhu kusho ukuthi idatha yakho iphephile, ngokuya ngalokho okushiwo umthetho.
Idatha yomuntu siqu osinikeza yona, njalo ngemvume yakho ekhanyayo, izogcinwa futhi icutshungulwe ngezinhloso ezinikezwe futhi zichazwe ngezansi kule Nqubomgomo Yobumfihlo, kuze kufike isikhathi lapho usicele ukuthi sisuse..
Sikwazisa ukuthi Le Nqubomgomo Yobumfihlo ingashintshwa nganoma yisiphi isikhathi, ukuze ihambisane nezinguquko zomthetho noma izinguquko emisebenzini yethu, naleyo eshicilelwe nganoma yisiphi isikhathi kuwebhu isebenza. Ukuguqulwa okunjalo kuzokwaziswa kuwe ngaphambi kokusebenza kwaso.
Kufanele wazi, ukuze uthole ukuthula kwengqondo, ukuthi siyohlala sicela imvume yakho ecacile yokuqoqa idatha yakho ngenjongo ehambisanayo eshiwo esimweni ngasinye, okusho ukuthi, uma unikeza leyo mvume, uyifundile futhi wamukela le Nqubomgomo Yobumfihlo..
Okwamanje lapho ufinyelela futhi usebenzise le webhusayithi, uthatha isimo sakho somsebenzisi ngamalungelo akho nezibopho ezihambisanayo.
Uma ungaphezulu kweminyaka engu-18 ubudala, ungabhalisa njengomsebenzisi kule webhusayithi ngaphandle kwemvume yangaphambilini yabazali bakho noma yokugada.
Uma ungaphansi kweminyaka eyi-18, uzodinga imvume yabazali noma yabagadi bakho ukucubungula imininingwane yakho.
Ukubhaliswa KANYE NENJONGO YEDATSI LAKHO
Ngokuya ngefomu noma isigaba osifinyelela, sizocela imininingwane ekhethekile ngezinhloso ezichazwe ngezansi. Ngazo zonke izikhathi, kufanele unikeze imvume yakho ekhanyayo, lapho sicela imininingwane yomuntu ngezinjongo ezilandelayo:
Izinhloso ezithile ezikhonjiswe ikakhulukazi ekhasini ngalinye noma ezingxenyeni lapho kuvela khona ifomu lokubhalisa noma oxhumana naye nge-elekhthronikhi.
Ngokuvamile, ukuhlangabezana nezicelo zakho, ukubekwa kwamazwana, ukubuzwa noma yiluphi uhlobo lwesicelo olwenza njengomsebenzisi ngokusebenzisa amanye amafomu wokuxhumana esikunikeza wona
Ukukwazisa ngemibuzo, izicelo, imisebenzi, imikhiqizo, izindaba kanye / noma nezinsizakalo; nge-imeyili, ifeksi, iWhatsapp, iSkype, ucingo olunikezwe, ama-sms nama-mms.
Ukukuthumela ukuxhumana kwezentengiso noma kwezokukhangisa ngokusebenzisa ezinye izindlela ze-elekhthronikhi noma ezibonakalayo ezingenza ukuxhumana kube nokwenzeka.
Lokhu kuxhumana kuzohlala kuhlobene nemikhiqizo yethu, amasevisi, izindaba noma amaphromoshini, kanye naleyo mikhiqizo noma amasevisi esingase sicabangele njengentshisekelo kuwe futhi angase anikezwe abahlanganyeli, izinkampani noma "ozakwethu" esinezenyusa noma izivumelwano zokusebenzisana kwezohwebo.
Uma kunjalo, siyaqinisekisa ukuthi laba bantu besithathu ngeke babe nokufinyelela kwimininingwane yakho, ngaphandle kwalokho okuvezwe ngezansi, kunoma yikuphi lokhuxhumana okwenziwe ngabakwa I-COSMOVIL, njengomnikazi wewebhusayithi.
Le webhusayithi ibonisa imikhiqizo ehambisana nomuntu wesithathu. Ngokuqondile kusuka AMAZON.
Lokhu kusho ukuthi uma uchofoza ku- "Thenga Manje" noma okufanayo, uzoqondiswa kabusha ekhasini lapho imikhiqizo inikelwa khona.
Kulokhu, kufanele wazi ukuthi sihlinzeka futhi sixhumanise kuphela ukuxhumana kwamakhasi kanye / noma amapulatifomu alaba bantu besithathu lapho imikhiqizo esiyikhombisayo ingathengwa khona, ukuze kube lula ukuseshwa nokutholakala kalula kwayo.
Lawa makhasi axhunyiwe futhi avela eceleni awabuyekezwa noma alawulwa yizilawuli noma ukunconywa yithi, ngakho-ke akunaziphi izimo I-COSMOVIL izobhekwa njengesibopho sokuqukethwe kulawa mawebhusayithi, ngezibopho ezitholakala ekusebenziseni kwawo kuzo zonke izindawo, noma ngezinyathelo ezithathiwe mayelana nobumfihlo bomsebenzisi, ukucutshungulwa kwedatha yakhe yomuntu siqu noma ezinye ezingase zisungulwe.
Kuzo zonke lezi zizathu, sincoma ukuthi ufunde ngokucophelela futhi ngaphambi kwesikhathi yonke imibandela yokusebenzisa, izimo zokuthenga, izinqubomgomo zobumfihlo, izaziso zezomthetho kanye / noma ezifanayo zalezi zingosi ezixhunyiwe ngaphambi kokuqhubeka nokuthenga le mikhiqizo noma ukusebenzisa amawebhusayithi. .
UKUTHOLA NOQINISO NGEQINISO
Njengomsebenzisi, unesibopho sakho sokwenza ubuqiniso nokuguqulwa kwedatha oyithumela kuyo I-COSMOVIL, sidingida nganoma yisiphi isibopho kulokhu.
Ngamanye amagama, kungumsebenzi wakho ukuthi uqinisekise futhi uphendule nganoma iyiphi indlela ukunemba, ubuqiniso kanye nokuba yiqiniso kwemininingwane yomuntu enikeziwe, futhi uzibophezela ukuyigcina ivuselelwa ngokufanele.
Ngokuhambisana nalokho okuvezwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo, uyavuma ukunikeza imininingwane ephelele nenembile kwifomu yokuxhumana noma yokubhalisa.
UKUQEDWA KOKUFUNDA KANYE NOKULUNGA KOKUVIKELA
Njengomnikazi wedatha osinikeze yona, ungasebenzisa amalungelo akho okufinyelela, ukulungisa, ukukhansela nokuphikisa noma nini, ngokusithumela i-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe]kanye nokufaka ikhophi lomazisi wakho njengobufakazi obulungile.
Ngokunjalo, ungazikhipha ohlwini nganoma yisiphi isikhathi ukuze uyeke ukuthola incwadi yethu yezindaba noma okunye ukuxhumana kwezentengiso, ngokuqondile ku-imeyili efanayo oyitholile noma ngokusithumela i-imeyili ku- [i-imeyili ivikelwe]
UKUFINYELELA UKUTHOLA NGESIKHATHI SESITHATHU
Ukuze unikeze izinsizakalo ezidingekayo ngokuqinile ekusebenzeni nasekuthuthukisweni kwemisebenzi yale webhusayithi, siyakwazisa ukuthi sabelana ngemininingwane nabahlinzeki bezinsizakalo abalandelayo ngaphansi kwezimo zabo zobumfihlo ezihambisanayo.
Ungaqiniseka ukuthi laba bantu besithathu ngeke bakwazi ukusebenzisa imininingwane eshiwo nganoma iyiphi enye injongo engalawulwa ngokuqondile ebudlelwaneni bethu nabo ngenxa yemithetho esebenzayo ekuvikelweni kwemininingwane yomuntu siqu.
Le webhusayithi isingathwa kuyo https://siteground.es/, uphawu lwentengiso SiteGround Hosting Professional, enikezela ngezinsizakalo zokubamba ukuze ufinyelele futhi uzulazule indawo yethu. Ungahlola inqubomgomo yobumfihlo nezinye izici zomthetho zale nkampani kusixhumanisi esilandelayo: https://www.siteground.com/privacy.htm.
Iwebhusayithi yethu isebenzisa amaseva wokukhangisa ukuze ihlinzeke ngokuqukethwe okuthengiswayo okubona kumakhasi ethu. Lawa maseva okukhangisa asebenzisa amakhukhi akuvumela ukuthi uvumelanise okuqukethwe kokukhangisa kumaphrofayili eningi labasebenzisi:
I-Google Analytics iyisevisi yezibalo zewebhu ehlinzekwa i-Google, Inc., inkampani yaseDelaware ihhovisi layo elikhulu liku-1600 Amphitheatre Parkway, MountainView (California), CA 94043, United States (“Google”).
AbakwaGoogle Analytics basebenzisa "amakhukhi", angamafayela wombhalo akwekhompyuter yakho, ukusiza iwebhusayithi ukuhlaziya ukuthi abasebenzisi bayisebenzisa kanjani iwebhusayithi.
Imininingwane ekhishwe ikhukhi ngokusetshenziswa kwewebhusayithi (kufaka phakathi ikheli lakho le-IP) izohanjiswa ngqo futhi ifakwe kungobo yomlando yi-Google. I-Google izosebenzisa lolu lwazi egameni lethu ukuze ilandele ukusetshenziswa kwewebhusayithi, ihlanganise imibiko ngomsebenzi wewebhusayithi futhi inikeze eminye imisebenzi ehlobene nomsebenzi wewebhusayithi nokusetshenziswa kwe-Intanethi.
I-Google ingadlulisela lolo lwazi kubantu besithathu uma kudingekile ngokomthetho, noma lapho kuthiwa abantu besithathu bacubungula imininingwane egameni le-Google. I-Google ngeke ihlobanise ikheli lakho le-IP neminye imininingwane enalo.
Njengomsebenzisi, nokusebenzisa amalungelo akho, ungenqaba ukuphathwa kwedatha noma imininingwane ngokwenqabela ukusetshenziswa kwamakhukhi ngokukhetha izilungiselelo ezifanele kwisiphequluli sakho, kodwa-ke, kufanele wazi ukuthi uma wenza njalo, ngeke ukwazi ukusebenzisa ukusebenza okugcwele kwale webhusayithi.
Ngokusebenzisa le webhusayithi, ngokuya ngolwazi olunikezwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo, wamukela ukucutshungulwa kwedatha yi-Google ngendlela nangezinjongo ezibonisiwe.
Ngeminye imininingwane, ungabheka inqubomgomo yobumfihlo yakwa-Google en https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
I-Google, njengomhlinzeki wozakwethu, isebenzisa amakhukhi ukuze inikeze izikhangiso kule webhusayithi. Ungakwazi ukuvala ukusetshenziswa kwekhukhi le-DART ngesikhangiso sika-Google nangokufinyelela inqubomgomo yobumfihlo yenethiwekhi yokuqukethwe: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.
I-Google isebenzisa izinkampani zokukhangisa zozakwethu ukunikeza izikhangiso uma uvakashela iwebhusayithi yethu. Lezi zinkampani zingasebenzisa ulwazi eziluthola ekuvakasheleni kwakho lokhu namanye amawebhusayithi (okungafaki igama lakho, ikheli, ikheli le-imeyili, noma inombolo yocingo) ukuze zikunikeze izikhangiso mayelana nemikhiqizo namasevisi ongase uwathakasele.
Ngokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ukucubungulwa kwemininingwane yi-Google ngendlela nangezinhloso ezikhonjisiwe.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokusetshenziswa kwamakhukhi nemikhuba yokuqoqa ulwazi kanye nezinqubo zokwamukela noma ukwenqaba, bona INQUBOMGOMO YAMAKHAYA.
Njengomnikazi wewebhusayithi, COSMOMOBILE usemukele zonke izindlela zobuchwepheshe nenhlangano ezidingekayo ukuqinisekisa ukuphepha nobuqotho bemininingwane yomuntu uqobo esebenza ngayo, kanye nokuvikela ukulahleka kwayo, ukuguqulwa kanye / noma ukufinyelela kwabantu abangavumelani nabathathu.
Sikukhumbuza ukuthi, ukuthola eminye imininingwane, ungaxhumana nabethu Isaziso Sezomthetho y Inqubomgomo yamakhukhi.